Top 8 kem chống muỗi hiệu quả và an toàn nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 8 kem chống muỗi hiệu quả và an toàn nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 8 kem chống muỗi hiệu quả và an toàn nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Sicwaninga ngokuzimela, sihlola, futhi sincoma imikhiqizo ehamba phambili, bona inqubo yethu yokubuyekeza lapha. Singathola ikhomishini lapho uthenga.
Isixosha omiyane siwumkhiqizo osetshenziswa kakhulu kokubili izingane kanye nabantu abadala. Ulayini womkhiqizo usetshenziswa kakhulu kukho konke ukuphuma, ukuhamba ngisho nasohambweni lwebhizinisi.
Pho ulethani lokhilimu? Uyazi ukuthi ungasebenzisa kanjani futhi uthole imikhiqizo ephumelela kakhulu? Uma kungenjalo, ungawuzibi umhlahlandlela wokuthenga owusizo kakhulu ongezansi.
1 Top 8 izinga omiyane oxosha ukhilimu namuhla
1.1 I-Soffell Mosquito Repellent Cream
1.1.1 Ukubuyekeza okusheshayo kwe-Soffell . Ukhilimu Oxosha Omiyane
1.2 Umuthi Oxosha Omiyane Oluhlaza Ogcobile
1.2.1 Ukubuyekeza okusheshayo Green Balm Mosquito
1.3 I-Rohto Metholatum Remos Ikhilimu Exosha Omiyane
1.3.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-Rohto Metholatum Remos Ukhilimu Oxosha Omiyane
1.4 I-Mogi Sam Yemvelo Yokuxosha Omiyane Cream
1.4.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-Mogi Sam Natural Repellent Cream
1.5 I-Chicco Mosquito Repellent Cream
1.5.1 Ukubuyekezwa okusheshayo kwe-Chicco Mosquito Repellent Cream
1.6 I-Jorubi Ikhilimu Yokuxosha Omiyane
1.6.1 Buyekeza ngokushesha i-Jorubi . Ukhilimu Oxosha Omiyane
1.7 I-ATO AI Ikhilimu Yokuxosha Omiyane
1.7.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-ATO AI Mosquito Repellent Cream
1.8 ORAN BABY NGINGEMVELO Yokuxosha Omiyane kanye Nokhilimu Opholisayo
1.8.1 Ukubuyekeza okusheshayo ORAN BABY NGINGEMVELO Yokuxosha Omiyane kanye Nokhilimu Opholisayo
2 Ithebula lokuqhathanisa lamakhilimu amanje aphephile axosha omiyane
3 Ukusetshenziswa kokhilimu oxosha omiyane kubasebenzisi
4 Ungakhetha kanjani umuthi oxosha omiyane ongcono kakhulu namuhla
4.1 1. Okwengane
4.2 2. Kwabadala
4.3 3. Kwabesifazane abakhulelwe
5 Ungasifaka kanjani kahle isixosha omiyane?
6 Imuphi umkhiqizo wokuxosha omiyane okufanele ngiwukhethe?
6.1 I-Soffell Mosquito Repellent Cream
Top 8 izinga omiyane oxosha ukhilimu namuhla
Phakathi kwemikhiqizo eminingi yokulwa nomiyane etholakalayo namuhla, ngikhethe ezimbalwa ezisezingeni elihle futhi ezithandwayo. Ake sibone ukuthi yiziphi izibulala-zinambuzane ezinhle ohlwini olulandelayo!
Xem Thêm Cách sử dụng serum vàng k24 | Muasalebang
Uphawu lokuhweba: Soffell
I-Soffell Mosquito Repellent Cream
Ukubuyekeza okusheshayo kwe-Soffell . Ukhilimu Oxosha Omiyane
I-Soffell inezinhlobo ezingu-2 zikakhilimu nesifutho ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi. Idizayini yebhodlela elincane, Kulula ukuhamba nawe.
Umkhiqizo Ingasetshenziselwa izingane. Ngezithako zemvelo, ziphephile, Isebenza amahora angu-10Ungacasuli isikhumba.
U-Soffell uye Ukunambitheka kwesithelo esilula, hhayi ukudlula amandla. Ingasetshenziselwa isikhumba esibucayi.
Uphawu lokuhweba: Umiyane
Umuthi Oxosha Omiyane Oluhlaza Ogcobile
Yehlisa iphunga lomzimba
Ukubuyekeza okusheshayo Green Balm Mosquito
I-Green Balm Mosquito Brand enezithako zemvelo ezifana ne-menthol Iphephile futhi ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, kuhlanganise nezingane. Ukhilimu unomphumela wokwenza isicaba futhi upholise ngokushesha ukulunywa nokuvuvukala kokulunywa omiyane.
Lo mkhiqizo une Iphunga elimnandi le-herbal. Isikhathi Kusebenza kufika emahoreni angu-8.
I-Green Balm Mosquito Brand iphinde isebenze ukunciphisa iphunga lomzimbaiphunga lonyawo, imihuzuko, ama-sprains, i-dermatitis, i-arthritis.
I-Green Balm Mosquito Brand
Uphawu lokuhweba: Isi-Rohto
I-Rohto Metholatum Remos Ikhilimu Exosha Omiyane
Ukubuyekeza okusheshayo i-Rohto Metholatum Remos Ukhilimu Oxosha Omiyane
I-Rohto Metholatum Remos iqukethe i-Diethyltoluamide 15% egunyazwe yi-WHO ne-EPA ngempumelelo futhi ephephile ekuxosheni omiyane. Imikhiqizo exosha omiyane ukusebenza amahora angu-10.
Ukhilimu ubuye ube ne-Aloe Vera ne-Vitamin E ukusiza Moisturize futhi wondle isikhumba. Inamandla okuxosha omiyane, Vimbela izifo ezithwalwa omiyane. Umkhiqizo uhloselwe ukusetshenziswa abantu abadala kanye nezingane ezingaphezu kweminyaka engu-4 ubudala.
I-Rohto Metholatum Remos enokhilimu Iphunga elimnandi elisawolintshi, elinganamafuthaifanele wonke amacala.
Xem Thêm Top 3 kem chống nắng Anessa cho da nhạy cảm tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Uphawu lokuhweba: Sam Natural
I-Mogi Sam Yemvelo Yokuxosha Omiyane Cream
Ukubuyekeza okusheshayo i-Mogi Sam Natural Repellent Cream
I-Mogi Sam Natural iyasebenza ukukhululeka okusheshayo lapho elunywe umiyane noma isinambuzane. Isebenza cishe amahora angu-6.
Iphunga lamafutha abalulekile ewolintshi nerosemary liyasiza Isinqamuli somiyane esisebenzayo. Iphunga lemvelo elilula, iphephile akukho ukucasuka.
Izithako zemvelo nazo Isiza ukukhipha amanzi kanye nokuthambisa isikhumba.
Intengo ibiza kakhulu uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe.
Amafutha abalulekile e-Orange ne-rosemary
Uphawu lokuhweba: Chicco
I-Chicco Mosquito Repellent Cream
Ifanele abesifazane abakhulelwe kanye nezingane
Ukubuyekezwa okusheshayo kwe-Chicco Mosquito Repellent Cream
I-Chicco ekhishwe esithelweni se-Andiroba kanye ne-perilla inomphumela Isinqamuli somiyane esisebenzayo. I-Chicco isesimweni sejeli, isakazeka kalula, ngokushesha I-Absorbent futhi ayinamafutha.
Ukhilimu uyasebenza Kupholisa ukuvuvukala nokuluma ngempumelelo. Iphunga lemongrass lipholile, Kumnandi ngisho nangomuzwa wokuhogela.
Ukuhlanganisa izithako ezisebenzayo ze-Vitamin E ne-Glycerin ukuthambisa, ukondla isikhumba. Umkhiqizo Iphephile kokubili abesifazane abakhulelwe nezingane.
Kungumkhiqizo osezingeni eliphezulu, ngakho kubiza kakhulu.
Gel, fafaza, roll
Uphawu lokuhweba: Jorubi
I-Jorubi Ikhilimu Yokuxosha Omiyane
Ukukhishwa kwe-Aloe vera
Buyekeza ngokushesha i-Jorubi . Ukhilimu Oxosha Omiyane
I-Jorubi Ikhilimu Yokuxosha Omiyane inezithako ezisebenzayo i-Ethyl Butylacetylaminopropionate 20% kanye nezithako ezingasebenzi 80%. U-ayisikhilimu unawo Anti-mosquito amahora angaba ngu-13awudingi ukuphinda usebenzise ukhilimu izikhathi eziningi futhi usagcina ukusebenza kahle komkhiqizo.
Nge Ukukhishwa kwe-aloe vera yemveloumkhiqizo ilungele ngisho nezingane. Intengo yalo khilimu wokuxosha omiyane iphezulu impelakuye ngezimo zezomnotho ongazicabangela ungaxhunyiwe ku-inthanethi!
Uphawu lokuhweba: Athi Ai
I-ATO AI Ikhilimu Yokuxosha Omiyane
Ukubuyekeza okusheshayo i-ATO AI Mosquito Repellent Cream
Umkhiqizo Iqukethe izinhlanganisela ezifana ne-ecklonia, hizikia fusiforme kanye ne-giant kelp extract. Le nhlanganisela inikeza ukuvikelwa kwesikhumba okuphelele.
Ngaphandle kwalokho, lo khilimu oxosha omiyane nawo Iqukethe amafutha e-eucalyptus leaf namafutha e-clove budisiza ukuvimbela omiyane nezinambuzane ngokuphumelelayo.
Ukhilimu Ayiqukethe izinhlanganisela zamakhemikhalic kuyingozi akupheli Iphephile ezinganeni. Umkhiqizo Ayiqukethe amakha okwenziwaIfanele zonke izinhlobo zesikhumba kuhlanganisa nesikhumba esibucayi.
Uphawu lokuhweba: NginguMvelo
ORAN BABY NGINGEMVELO Yokuxosha Omiyane kanye Nokhilimu Opholisayo
Ukuthungwa okukhilimu okukhanyayo
Ukubuyekeza okusheshayo ORAN BABY NGINGEMVELO Yokuxosha Omiyane kanye Nokhilimu Opholisayo
Lona umkhiqizo wokulwa nomiyane eyezingane kuphela. Into ekhilimu ukukhanya bushelelezi, ayibangeli isikhumba esinamathelayo noma esingakhululekile ezinganeni. Ukhilimu Inomphumela wokuvikela cishe amahora angama-6-8.
Izithako eziyinhloko ze-cream zihlanganisa: Amafutha Abalulekile Ewolintshi Amnandi, Isihlahla Setiye, I-Cajeput, I-Chamomile Extract, Itiye Elihlaza, Amafutha Amaminerali, I-Stearic Acid, i-Cyclopentane-Dioxane nezinye izinhlanganisela.
Amafutha abalulekile awolintshi amnandi
Ithebula lokuqhathanisa lamakhilimu amanje aphephile axosha omiyane
Ngokusekelwe phezulu ngempumelelo omiyane okhilimu oxosha omiyane ngenhla, mina ngeke ngamafuphi ulwazi olubalulekile umkhiqizo ngokusebenzisa ithebula lokuqhathanisa elilandelayo. Ungathembela kulokho ukwenza kube lula ukukhetha!
Ukusetshenziswa kokhilimu oxosha omiyane kubasebenzisi
Ukusetshenziswa kokhilimu oxosha omiyane
Isixosha omiyane siwumkhiqizo owusizo kakhulu kithi, ikakhulukazi izingane. Ngakho yikuphi ukusetshenziswa okuphumelelayo kwalo mkhiqizo esiwudinga kangaka? Ake sibheke ukusetshenziswa okulandelayo:
Ukhilimu usebenza ukuvikela isikhumba ekulunyweni omiyane cishe amahora angama-3-4 ngemuva kokufakwa.
Umkhiqizo upholisa, ukhulula ukulunywa, unciphisa ububomvu nokuvuvukala komiyane noma ukulunywa yizinambuzane.
Ukhilimu oxosha omiyane we-antibacterial, anti-inflammatory futhi usiza ukuphulukisa ngokushesha izilonda ezibangelwa ukuklwebheka nokuluma uma ulunywe omiyane.
Vikela ezifweni ezithathelwanayo ezibangelwa ukulunywa omiyane njenge: Dengue fever, umalaleveva, iviral fever, meningitis …
Ungakhetha kanjani umuthi oxosha omiyane ongcono kakhulu namuhla
Ukhilimu oxosha omiyane unemisebenzi eminingi ewusizo kubasebenzisi. Nokho, into ngayinye, ubudala ngamunye has amanothi ezahlukene kanjani ukukhetha ukuthenga okulungile. Imininingwane:
Izingane zinesikhumba esibucayi kakhulu futhi zivame ukungezwani nezinto ezithile. Ngakho-ke, lapho uthenga umuthi oxosha izingane, abazali kufanele banake lezi zindlela ezilandelayo:
Khetha imikhiqizo enemikhiqizo ehloniphekile, ukwethembeka okuphezulu, okuthenjwa omama abaningi. Kungcono ukukhetha imikhiqizo enikezwe ilayisense yoMnyango Wezempilo noma ehlolwe yi-Central Institute of Epidemiology. Isibonelo, u-Chicco, u-Soffell, u-Kokomo, umama nokunakekela…
Khetha ukuthenga imikhiqizo ezitolo ezikhethekile ngokuthengisa imikhiqizo edumile yomama nezingane emakethe.
Uthola kusukela emingakhini yobudala ukuthi umkhiqizo ukulungele yini? Ingabe ukhilimu ulungele iminyaka yengane yami? Ingabe zikhona izincomo ngomkhiqizo okungafanele zisetshenziswe?
Naka izithako kukhilimu uma uwuthenga. Khetha kuphela imikhiqizo enezithako zemvelo eziphephile ezinganeni.
Udinga ukuqaphela ezinye zezidingo ezilandelayo ukuze uqinisekise ukuphepha:
Khetha imikhiqizo enedumela eliphezulu, enemvelaphi ecacile. Kumshini oxosha omiyane, kunamalebula ewaranti futhi ahlolwe ngokuqinile njenge: Chicco, S-Quito, Moustidose…
Funda ngokucophelela imiyalelo yokusebenzisa kanye nezincomo zomenzi. Ingabe kufanele uthole ukuthi umkhiqizo ubafanele yini abantu abangezwani nezinto ezithile noma izifo?
3. Kwabesifazane abakhulelwe
Umuthi oxosha omiyane ofanele abesifazane abakhulelwe
Uma ukhulelwe, kufanele usebenzise noma yimuphi umuthi noma ukhilimu wesikhumba ngokuqapha okukhulu. Kufanele ukhethe ukuthenga imikhiqizo ngokusho kwezincomo zochwepheshe. Imininingwane:
Khetha uhlobo olunikezwe ilayisense nguMnyango Wezempilo, oluhlolelwe abesifazane abakhulelwe njengoChicco…
Khetha ukuthenga imikhiqizo enezithako zemvelo eziphephile kwabesifazane abakhulelwe. Umkhiqizo akufanele uqukathe i-DEET.
Ngaphambi kokuthenga, kufanele ufunde ngokucophelela imiyalelo yokusetshenziswa, izincomo zomkhiqizi ukuze ugweme ukungezwani komzimba.
Ungasifaka kanjani kahle isixosha omiyane?
Uzitholele isixosha omiyane esihle, esifanelekile. Kodwa awazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokuphumelelayo? Iyiphi indlela ephephe kunazo zonke yokugcoba ukhilimu? Ngizokwembulela ulwazi “lwangempela” khona lapha:
Okhilimu abaningi bokulwa nomiyane basebenza ngendlela yephunga. Ngakho-ke ukuze wonge imali, udinga kuphela ukufaka amabala ngaphandle kokumboza zonke izimbobo esikhumbeni. Gwema ukuthintana namehlo, umlomo namanxeba avulekile.
Imikhiqizo eminingi isebenza kuphela amahora angama-3-4. Ngakho-ke, khumbula ukufaka isicelo kabusha njalo emahoreni ama-3 ukuze uthole imiphumela ehamba phambili. Ezinye izinto ezixosha omiyane ezinamafutha abalulekile zizondiza zisuse iphunga ngokushesha. Ngemuva kwamahora ama-2, kufanele uphinde ufake isicelo.
Ngemva kokulunywa umiyane, sebenzisa ngokushesha ukhilimu endaweni elunywayo ukuze unciphise ukucasuka.
Imuphi umkhiqizo wokuxosha omiyane okufanele ngiwukhethe?
Ngisakholelwa ekusebenziseni isixosha omiyane i-Soffell njalo uma ngikhetha ukuthenga lo mkhiqizo. Ngawo womabili amafomu okhilimu kanye ne-spray, ngikhetha kalula ngokuvumelana nezidingo zami. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo ulungele ukusetshenziswa ezinganeni, ngakho-ke awulungile kakhulu futhi uphephile, unciphisa ukucasuka.
Ngaphezu kwalokho, kuseneminye imikhiqizo yekhwalithi engiyethule kuwo wonke umuntu. Sicela ukhethe ngokuthanda kwakho uma ungenayo inketho efana neyami!
Ngebhodlela elixosha omiyane eliwusizo kakhulu, wena nomndeni wakho wonke ningaqiniseka. Umkhiqizo uhlinzeka ngokuvikeleka okuphelele kwawo wonke amalungu endlu. Sicela uthande futhi wabelane ngokuthunyelwe kabanzi ukuze wonke umuntu abheke!
Top 7 sản phẩm nước hoa hồng Paula’s Choice được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang